May | 2012 | asnthanhan's Blog
SIN-YGN-SIN Jet Star Two to Go Promotion
Posted by asnthanhan under အထူးသတင်း, ငွေကြေး, နိုင်ငံခြား
Ko Sol May 7,12
Jet Star Asia မှ Special promotion အဖြစ် စင်္ကာပူ – ရန်ကုန် – စင်္ကာပူ ခရီးစဉ်ကို အောက်ပါ အသွား အပြန်ရက်များအတွက် ခရီးသည် (၂) ဦးအတွက် လေဆိပ်ခွန်အပြီးအစီး S$375 သာကျသင့် ပါသည်။ ခရီးသည် (၁) ဦးလျှင် ကီလို(၂၀)သယ်ယူခွင့်ရရှိပါမည်။ မေလ (၉) ရက် နေ့အထိသာ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမြန်ဝယ်ထားနိုင်မှခုံအတွက် စိတ်ချရပါမည်။
စင်္ကာပူ မှ ရန်ကုန် သို့
စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉
အောက်တိုဘာ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၄၊ ၂၆
ရန်ကုန် မှ စင်္ကာပူ သို့
စက်တင်ဘာ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉၊
အောက်တိုဘာ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၄၊၂၆၊ ၃၁
နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၇
၁။ လေယာဉ်အချိန်နှင့် ရက်သည်လေကြောင်းလိုင်းပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
၂။ ဝယ်ယူပြီး လက်မှတ်အတွက် လုံးဝ ငွေပြန်မအမ်းပါ။
၃။ Promotion အရောင်းအတွက် ထိုင်ခုံကြိုတင် ယူခွင့်မရှိပါ။
၄။ အသွားအပြန် (၂) ကြောင်းလုံး အတွက် ဝယ်ယူထားသော ခရီးသည် (၂) ဦး အတူခရီးသွားရမည်ဖြစ်သည်။
၅။ ဝယ်ယူပြီးလက်မှတ်အတွက် ခရီးစဉ် နှင့် ခရီးသည် အမည် အပြောင်းအလဲ လုံးဝ လုပ်ခွင့်မရှိပါ။
၆။ အခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ အကြုံးဝင်သည်။
ဖော်ပြပါ Jetstar Pormotion အတွက် ခရီးသည်ကိုယ်တိုင် online မှ Credit/Debit Card များဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ (Jetstar သို့ ဝန်ဆောင်ခ ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင်S$18 ပေးရသည်) offline payment ဖြစ်သည့် SAM Machine မှသော်လည်းကောင်း (ဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလို) ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများဖြင့် မဝယ်ယူလိုပါက မိမိခရီးသွားလိုသည့် ရက် SIN-YGN နှင့် YGN-SIN ရက်အတိအကျ၊ ခရီးသည်အမည်များ(inEnglish)၊ခရီးသည်၏ မွေးနေ့တို့ကိုပေးပို့ပြီးဘဏ်ငွေလွှဲစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
လက်မှတ်ကို e-mail မှ (သို့မဟုတ်) စာတိုက်မှ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်တိုင်ယူစနစ် ဖြင့် ယူဆောင်နိုင်ပါသည်။ ၂ဦးစာအသွားအပြန်လက်မှတ်အတွက် S$375 သာကျသင့်ပါသည်။မေးမြန်းလိုပါက modern_sol15@live.com.sg သို့ e-mail ပို့နိုင်ပါသည်။
Singapore – Yangon လေယာဉ်ပျံ လက်မှတ်များဈေးချ
စင်္ကာပူ နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြား အသွားအလာများနေတာနဲ့ အမျှ လေကြောင်းလိုင်းများအနေနဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ဈေးချလေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာလေကြောင်းက အနိုမ့်ဆုံးဈေး S$230 လောက်နဲ့ SIN-YGN ကိုချပေးပေမယ့် ရန်ကုန်ကနေ စင်္ကာပူကိုလာတဲ့ဈေးကိုတော့ သိပ်ချလေ့မရှိပါဘူး။ Silk Air အနေနဲ့လောလောဆယ် အနိုမ့်ဆုံးဈေးဆိုလို့ S$345 မှာ online promotion ရောင်းပေးနေတာတွေ့ ရပါတယ်။
အခုမြန်မာပြည်မိုးတွင်းဝင်လာပြီး ခရီးသွားရာသီအခေါ် low season အတွက် Jet Star Asia ကနေ ချလိုက်တော့ ဈေးကိုတော့ ပြိုင်ဖက်လေကြောင်း လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ MAI နဲ့ Silkair တို့ ဘယ်လိုမှလိုက်မချနိုင်လောက်တော့ဖူး လို့ ထင်တာပါပဲ။ JetStar က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်မှာ TakeaFriend FREE promotion နဲ့ ဈေးချတဲ့အခါ ရန်ကုန်ကပဲ စင်္ကာပူလာလာ၊ စင်္ကာပူ က နေရန်ကုန်ပဲ သွားသွား အနိုမ့်ဆုံးဈေး (၂) ယောက်ကို S$344 နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို အသွားအပြန် အပြီးအစီး ကီလို ၂၀၊ လက်ဆွဲ ၁၀ သယ်ခွင့်အပါ S$172 ပဲကျတော့တဲ့အတွက် အလွန်သက်သာတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။
(၂) ယောက်အတွက် S$344 လျော့လှပြီအောက်မေ့လို့ ဝယ်လိုက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာတော့ JetStar က Travel Asia Sales Promotion ကို Launch လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ခရီးသည် ဘယ်နှဦးပဲသွားသွား ရန်ကုန်- စင်္ကာပူ၊ စင်္ကာပူ-ရန်ကုန် လက်မှတ်ကို အနိုမ့်ဆုံးဈေး တစ်ယောက်ကို S$158 နဲ့ ထပ်ပြီး ဈေးချ လိုက်ပါတယ်။ အခုမြန်မာငွေပေါက်ဈေးနဲ့ဆို ၁ သိန်းစွန်းစွန်းလေးပဲ ကျလို့ ရန်ကုန် -မန်းလေး လေပျံ လက်မှတ်တွေ၊ ရန်ကုန် – ဘန်ကောက်လေပျံလက်မှတ်တွေ ထက်တောင်သက်သာ သွားပါတယ်။ သို့သော် promotion လက်မှတ်ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ weekend တွေမပါပဲ weekday တွေထဲမှာပဲ ရမှာပါ။ သူငယ်ချင်း ညီအကို၊ မောင်နှမများ ရန်ကုန်ကို သက်သက်သာသာ လေးနဲ့ ပြန်ချင်တယ်ဆိုရင် သိရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ခရီးသွားရမယ့် ရက်ကတော့သြဂုတ်လ (၈) ရက်နေ့နဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်ကြားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး Promotion ပြီးတဲ့ရက်ကတော့ မေလ ၁၄ ရက်နေ မနက် ၁၀ နာရီပါတဲ့။
တစ်ခုလေး သတိထားရမှာက Online ပေါ်မှာ ထိုင်ခုံရွေးမလား မေးရင် မရွေးပို့နဲ့၊ တကယ်လို့များ credit/debit (Master/Visa/Diners) ကဒ်များနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင် ခရီးသည်တစ်ဦးကို S$18 ထပ်ပေးရမှာပါ။ မပေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Singpost ကပေးနိုင်မယ့် Function ကိုရွေးပြီး SAM Machine ကနေသွားပေးရင် ဝန်ဆောင်ခထပ်ပေးစရာမလိုပါဘူး။
Singapore Ferrari Taxi Crash Enhanced HD Footage!
Posted by asnthanhan under မူခင်း, အထူးသတင်း
င်္ဒီ Ferrari ကားတိုက်မှုက အခုရက်ပိုင်းမှာ စကာင်္ပူကလူတော်တော်များမှာ ရေပန်းစား ပြောဆိုနေ တာတွေ လို့တင်ပေးလိုက်တယ်၊ ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလို့? Taxi စီးနေရတာကိုတောင် မလုံခြုံသေးရင် ဘာလိုလုပ်မလဲ? ဒီTaxi စီးမိတဲ့ မိန်းခလေးရဲ့ကုသိုလ်ကံ ဘယ်လောက်ဆိုးပြီး ကြေကွဲဖို့ကောင်းလဲလို့? လူဘ၀မှာ ကြာကြာနေဖို့ ကံဇာတာ မပါဘူးနှင့်တူတယ်၊
Ferarri ကားရဲ့အမြန်နှုံး 140km/h က ညဖက်စကာင်္ပူမြို့ထဲကကားမောင်းတဲ့နှုံးလား? စဉ်းစား ကြည့် လိုက်ပါအုံး! Hight way လမ်းက အမြန်နှုံး ထက် တောင်ကျော်နေပြီ၊ ကားလဲ ဆုတ်ပြတ်သတ်ပြီး အင်ဂျင်တွေတောက်ပြုတ်ထွက်ကုန်တယ်၊
ဒါကိုကြည့်လိုက်တာနှင့် Taxi ထဲက လူတော့ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့? စဉ်းစားတာကြည့်လိုက်ပါအုံး?
STOMPer Ilovewaffles came across an online video that shows the actual crash involvingaFerrari andataxi at Rochor Road, and was shocked at how loud the sound of the collision was.
The video shows just how fast the Ferrari was travelling at, and the sound highlights the impact during the collision.
“I found this video on facebook fromafriend of mine.
“It’s the actual video from the taxi behind.
“Just hear the loudness of the collision!
Ferrari crash: Physics teacher calculates that sports car was speeding at 140km/h
STOMPer Little Food Steps found this calculation of the speed of the Ferrari involved in the fatal Rochor Road accident made byaPhysics teacher. The conclusion is that it was speeding at about 140kmh when it crashed into the taxi.
The accident occurred whenaFerrari collided intoataxi last Saturday (May 12) at the junction of Rochor Road and Victoria Street. There have been three casualties so far — the Ferrari driver, the taxi driver and his female passenger.
“I saw this onablog at http://weelookang.blogspot.com/2012/05/what-evidence-of-speed-ferrari-was.html.
“The author did some simulations that indicated the Ferrari was possibly travelling at 140±30km/h at the point of impact.
“It seems pretty accurate, given that they managed to account for the depth perception effects and estimated the distances based on the width of the taxi, which is in roughly the same plane as the Ferrari at the point of impact.
“No offense intended to any of the victims, but I thought this may be of interest to Stompers who wish to estimate how fast the Ferrari was travelling.
Check out images 1 to3for the calculations by the Physics teacher in the gallery below. The rest of the pictures are of the Ferrari crash.
<a href="http://static.stomp.com.sg/site/servlet/linkableblob/stomp/1103410/data/pic31jpg1336820698591-data.jpg&quot; rel="lightbox-1109242" title="
Ferrari driver’s family at the mortuary
“> <a href="http://static.stomp.com.sg/site/servlet/linkableblob/stomp/1103412/data/pic32jpg1336820698966-data.jpg&quot; rel="lightbox-1109242" title="
“> <a href="http://static.stomp.com.sg/site/servlet/linkableblob/stomp/1103414/data/pic33jpg1336820699544-data.jpg&quot; rel="lightbox-1109242" title="
“> <a href="http://static.stomp.com.sg/site/servlet/linkableblob/stomp/1103416/data/pic34jpg1336820699934-data.jpg&quot; rel="lightbox-1109242" title="
“> <a href="http://static.stomp.com.sg/site/servlet/linkableblob/stomp/1103418/data/pic35jpg1336820700684-data.jpg&quot; rel="lightbox-1109242" title="
“> <a href="http://static.stomp.com.sg/site/servlet/linkableblob/stomp/1103420/data/pic36jpg1336820701512-data.jpg&quot; rel="lightbox-1109242" title="
“> <a href="http://static.stomp.com.sg/site/servlet/linkableblob/stomp/1103422/data/pic37jpg1336820701950-data.jpg&quot; rel="lightbox-1109242" title="
“> <a href="http://static.stomp.com.sg/site/servlet/linkableblob/stomp/1103424/data/pic38jpg1336820702637-data.jpg&quot; rel="lightbox-1109242" title="
“> <a href="http://static.stomp.com.sg/site/servlet/linkableblob/stomp/1103426/data/pic39jpg1336820702965-data.jpg&quot; rel="lightbox-1109242" title="
Posted by asnthanhan under စီးပွားရေး, အထူးသတင်း, ငွေကြေး, ဆောင်းပါး
၀ိဝ်ဆိုဒ်၊ ဘလော့သမား နှင့် နာမည်တအားကြီးတဲ့ ဖေ့ဘွတ်အသင်းဝင် တွေတော်တော်များများ အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ မိမိရဲ့ ၀ိ်ဝ်ဆိုဒ်၊ ဘလော့တွေမှာ ဘယ်လိုဝင် ငွေရှာ ရမလဲဆိုတာ မသိကျ ကျပါဘူး၊ ဒါကြောင့်အသိပညာပေးအနေနှင့် ရေးလိုက်ပါတယ်၊ အိမ်မှာနေရင်း အားလပ်တဲ့အချိန်ပိုင်းနှင့်လဲ အလုပ် လုပ်လို့ရတာကိုတွေ့ရလို့ ရေးလိုက်ရတာပါ၊ တော်တော်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်၊
ဒါပေမဲ့ သတိထားကျရမဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်က အစပိုင်းမှာ အလကားပေးထားပြီးနောက်ပိုင်း အဓိကကသော အရေးကြီးတဲ့နေရာကိုရောက်ရင် ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ ၀ိဝ်ဆိုဒ်တွေလဲ အများကြီးပါ၊ ကျော်ငြာကောင်းလွန်းလို့ ချက်ချင်းဘဲ ၀င် ငွေ ရတော့မလိုနှင့်ကလိမ်လုပ်တဲ့နည်းတွေက လည်း အများကြီးပါ၊စီးပွားရေးလုပ်နေကျတာကိုး! ဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်နှင့်တော့ ဘာမှာမရပါဘူး?
အဲ!အလကားပေးထားတဲ့ ၀ိဝ်ဆိုဒ်တွေလဲအများကြီးပါ၊ များလွန်းလို့ ဘယ်ဝိ၀်ဆိုဒ်တွေက ဘယ်လိုပညာပေးထားတယ်ဆိုတာ ရေးဖို့များလွန်းလို့အခန်းဆက်တွေနှင့် အပိုင်းတွေခွဲပြီး တောက်လျှောက်ရေးသားပေးမှ ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
အဆင့်တိုင်းရှင်းပြမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာလို့ဆိုတော့ ၀ိဝ်ဆိုဒ်သမားတွေဆိုတော့ နဲနဲနည်းလမ်း ပြရင်ရင် အဆင်လော့ပြီထင်တယ်၊ အဲ! မြန်မာစာတွေကိုတော့ လက်ခံတဲ့ ဆိုဒ်ရှားပါသေးတယ်နော်!
အခုဒီ၀၀်ဆိုဒ်က အလကားပေးထားသောဆိုဒ်ဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့ဝိ၀်ဆိုဒ်တွေမှာကျော်ငြာထည့်ရင် ၀င်ငွေ ပေးတဲ့ ဆိုဒ်လေးတခုဘဲ၊ အဲ! မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလဲ ကျော်ငြာလို့ရှိရင်တော့ ကျော်ငြာခပေးရမှပါ၊ Generate codeတွေကို မိမိရဲ့သက်ဆိုင်သောဝိ၀်ဆိုဒ်ရဲ့ HMTL တွေမှာထည့်ပေးလိုက်ယုံဘဲ၊ ဆိုဒ်အများကြီးရှိရင်တော့ ဆိုဒ်တခုချင်းစီမှာ codeထည့်ရပါတယ်၊
Put your website traffic to work for you!
WEBSITE OWNERS & BLOGGERS:
With AdHitz you could be receiving millions of ad impressions every day!
Let’s face it, advertising isanumbers game. The more your ad is shown, the higher percentage of click-throughs and sales you will convert. With AdHitz, you only pay for impressions that convert to click-throughs. Stop wasting your money on traffic that doesn’t convert!
Turn your advertising budget into sales with AdHitz!
Posted by asnthanhan under ဆောင်းပါး
ဓါးစာခံ စောလားပွယ်၊ မြန်မာ့မူးယစ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နိုင်ငံရေးကစားကွက် (ဆောင်းပါး)
တနင်္လာနေ့၊ မေလ 07 ရက် 2012 ခုနှစ် ကေအိုင်စီ ဆောင်းပါး – ကေအိုင်စီ
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်မှု ပမာဏတွင် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂမူးယစ်နှင့် ရာဇ၀တ် ဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၀ ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်သည့် ပမာဏသည် မက်ထရစ်တန် ၅၈၀ ရှိခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်မှု ပမာဏတွင် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂမူးယစ်နှင့် ရာဇ၀တ် ဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၀ ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်သည့် ပမာဏသည် မက်ထရစ်တန် ၅၈၀ ရှိခဲ့ပါသည်။ဘိန်းစိုက်ပျိုး သည့် ဧရိယာအကျယ်အ၀န်းမှာ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ၃၁၇၀၀ဟက်တာမှ ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ၃၈၁၀၀ဟက်တာသို့ တိုးလာသော်လည်း ၂၀၁၀ခု နှစ် ဘိန်းထွက်နှုံးကျရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ပိုးမွါးကျရောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၉၉၆မှ ၂၀၁၀ထိ မြန်မာနိုင်ငံ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုဇယား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၆ မှ ၂၀၀၆ ထိ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့သော်လည်း ထိုကာလတွင်း စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးခေါ် ရာဘ ဆေး ထုတ်လုပ်သည့်ပမာဏမှာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအဆင့် ၁သို့ ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀နှစ်ထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မှောင်ခို တင်သွင်းခဲ့သော ရာဘဆေး အရေအတွက်မှာ ၁ ဘီလျံ (သန်း တစ်ထောင်) ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၀အတွင်း ဖမ်းဆီးမိခဲ့သည့်အရေအတွက်မှာ သန်း ၄၀ ရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရှိသည့် ရာဘဆေးအများစုသည် ထိုင်း၊ လာအိုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ မှောင်ခိုတင်သွင်းလေ့ရှိ ခဲ့ရာမှ ယခုအချိန်တွင် နယ်စပ်မှတဆင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် အိန္ဒိယကိုပါ တင်သွင်းလာပြီ ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ (UNOD) မှ ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဒေသအလိုက် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုဇယား
၂၀၁၀ တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေး (ရာဘ)နှင့် ဘိန်းဖြူ ဖမ်းဆီးရမိသည့် ကိန်းဂဏာန်း သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းကျဆင်းနှုံးသည် ရာဘနှင့် ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်ခြင်း ကျဆင်း သည့်လဏ္ခာမဟုတ်ဘဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင် ခြင်း၊ စည်းရုံးခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေ ပါသည်။ အချို့သော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးတွင် မိမိပါတီအနိုင်ရပါ က ဘိန်းစိုက်ပျိုးရေးကို ခွင့်ပြုမည်ဟုဆိုသော စည်းရုံးရေးကို တွေ့ခဲ့ရသလို မူးယစ်ကုန်သည်တချို့သည်လည်း လွှတ်တော်တွင်းသို့ ရောက်ရှိနေပါပြီ။
နောက် သက်သေတခုမှာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း မူးယစ်ရာဇာများဖြစ်သော ခွန်ဆာ၊ လောဝ်စစ်ဟန်၏သား ထွန်းမြင့်နိုင် (Steven Law) တို့ကို တွေ့ရပါသည်။ မူးယစ်ကုန်သည်ဖြစ်နေပါစေ တနေ့တချိန်တွင်မြန်မာစစ် ဖက် ခေါင်းဆောင်နှင့်တည့်အောင်ပေါင်းပြီး အေးချမ်းစွာ နေနိုင် သည့်အပြင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ၊ ငွေကြေးခ၀ါချမှု (ငွေမဲမှ ငွေဖြူသို့ ပြောင်းလဲခြင်း)များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင် သောအချက်သည် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှင့် မူးယစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို များစွာအားပေးနေပါသည်။
မြန်မာအစိုးရသည် မူးယစ်ဆေး တိုက်ဖျက်ရေးကို သိသိသာသာ မတိုက်ဖျက်ခြင်းအတွက် အဓိကသုံးသပ်မိသော အချက်များမှာ –
– တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို အပြစ်ဖို့ပြီး စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ရန်
– ဘိန်းနှင့် မူးယစ်ဆေးထွက်ကုန် အများစုမှာ ပြည်ပဈေးကွက်အတွက်သာ ဖြစ်ခြင်း
– အုပ်ချုပ်ရေးအတွင်း မသမာမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှင့် မူးယစ်ဆေး ထုတ်လုပ်မှု အများအပြားတွင် အစိုးရမှ တာဝန်ရှိနေသူများ ပတ်သက်နေသလို အချို့ဒေသများတွင် စိုက် ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘိန်းစိုက်ပျိုးရန် အာဏာပိုင်များမှ အားပေးနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သက်သေအနေဖြင့် လူနေကျဲသော ချင်းတောင်တန်းများတွင် မြို့နယ်အာဏာပိုင်များက မြို့ပြင်များတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးခွင့် ပေးထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဒီ့အပြင် ဘိန်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဖမ်းဆီးရမိပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးသည့် အခမ်းအနားလုပ်ရန် အာဏာပိုင်များသည် မူးယစ်ကုန်သည်များကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ပြီး အလူခံလေ့ရှိနေသည်မှာလည်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘိန်းနှင့် မူးယစ်ဆေးထွက်ရှိခြင်း၏ အဓိကရေသောက်မြစ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် တာဝန်ရှိသော အာဏာပိုင်များ နှင့် အဓိကပင်စည်မှာ ဘိန်းနှင့် မူးယစ်ဆေး အများအပြား ထုတ်လုပ်သည့် မူးယစ်ရာဇာများ ဖြစ်နေပါသည်။
မြန်မာနှင့် ကီလိုမီတာ ၁၂၀၀ကျော် နယ်စပ်ထိနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စီမံကိန်း ၆၁ခုဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၉.၅၆၈ဘီလီလျံဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒုတိယ အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြုပ် ထားသော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ မြ၀တီ-မဲဆောက် နယ်စပ် ကုန်သွယ်တခုတည်းတွင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ သန်းတစ်ထောင်ကျော် ရှိပါသည်။ မြ၀တီ-မဲဆောက်နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးတံတားကို မြန်မာအစိုးရဖက်က ၂၀၁၀၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ရက်မှစပြီး တနှစ်ခွဲနီးပါးကြာ ပိတ်ထားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနယ်စပ် ကုန်သွယ် ရေးလမ်းကြောင်း ပိတ်လိုက်ခြင်းတွက် နေ့စဉ် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၈၈ သန်း ( အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂.၇၄)ကို ထိခိုက်ခဲ့ပြီး နယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးတွက် မြန်မာအစိုးရနှင့် အမြန်ဆုံး ဆွေးနွေးမည်ဟု ထိုင်းကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ပွန်တီဗာနာကာစိုင် (Mrs. Porn-tiva Nakasai – Minister of Commerce)က ပြောခဲ့ပါသည်။ တကယ်တမ်းတွင်မူ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုပိတ်ခြင်းကြောင့် နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာ နစ်နာသော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ နယ်စပ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးတွက် စိတ်အားထက်သန်နေသည်မှာ ထိုင်းအစိုးရသည် ထိုင်းပြည်သူလူထု၏ နစ် နာမှုများကို အလေးထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မဲဆောက်မြို့နှင့် တာ့ခ်ခရိုင် (Tak Province) ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် မြ၀တီ-မဲဆောက်ကုန်သွယ် ရေးနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်နွယ်နေပါသည်။
၂၀၁၀၊ နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲရက်အပြီးတွင် ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး ဦးဆောင်သော DKBA အဖွဲ့မှ မြ၀တီမြို့သို့ စီးနင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် မှုသည် စစ်အစိုးရကို များစွာ သိက္ခာကျစေခဲ့ပါသည်။ လနှင့်ချီကြာသော အစိုးရ၏ တန်ပြန်စစ်ဆင်ရေးကို ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးတို့အဖွဲ့မှာ ခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့သဖြင့် စစ်အစိုးရကို ပိုပြီး သိက္ခာကျစေခဲ့ပါ သည်။ ၎င်းနောက် မြ၀တီ-မဲဆောက် နယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ဖွင့်ရေးတွင် မြန်မာအစိုးရ ဖက်မှ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အကျိုးဖြင့် ဆွေးနွေးလာပါသည်။ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးတွင် ထိုင်းအစိုးရမှ ပူးပေါင်းကူညီပြီး ဗိုလ်နှုတ် ခမ်းမွှေးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ မြ၀တီ-နယ်စပ်ဂိတ်ကို ပြန်ဖွင့်မည်ဟု မြန်မာအစိုးရက တောင်းဆိုလာပါသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌သာ အခြေစိုက်သော ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးကို ထိုင်းဖက်မှ ဖမ်းဆီးပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချေ။
ဧပြီလ ၂၀ရက်နေ့က မူးယစ်ဆေးကုန်ကူးမှုတွင် ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်သူ ၂၅ယောက်၏အမည်ကိုဖမ်းဆီး နိုင်သူအား ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၂ သန်း ဆုကြေးငွေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအစိုးရ၏ Office of the Narcotics Control Board -ONCB အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုစာ ရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၃ဦးအနက် DKBA ခွဲထွက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှုးချုပ်စောလားပွယ် ခေါ် ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး၏အမည်လည်းပါ ၀င်ခဲ့သည်။ ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးတစ်ဦးတည်းသာ ထိုင်းအစိုးရကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ တုန့်ပြန်ချက်တခု မှာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များကို မိမိနယ်ထဲ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်မှာ ထူးခြားချက်တစ်ခု ဖြစ်နေပါသည်။ ၎င်း (ဗိုလ်နှုတ် ခမ်းမွှေး)၏ တုန့်ပြန်ချက်ကို ထိုင်းအာဏာပိုင်မှ ပြန်လည် တုန့်ပြန်သည်မှာ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး၏ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုသည် လွန်ခဲ့သည့် ၉နှစ်မှ အမှုဖြစ်ပြီး မိမိတို့ဖက်မှ အထောက်အထားရှိသဖြင့် ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုယ်တိုင် လာရောက်ဖြေရှင်းရန် တောင်းဆိုထားပါသည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏ အခြေအနေကို လေ့လာပြီး သုံးသပ်မိသည်မှာ –
ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် အထောက်ထားမခိုင်လုံဘဲ စွပ်စွဲကြေညာမည်မဟုတ်သလို အထောက်အထားများစွာ ရှိသည့်အထဲမှ တစ်ခုတည်းကို ဆွဲထုတ်ထားသည်မှာ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါသည်။ ဒိပြင် လွန်ခဲ့သော ၉နှစ်ဆိုသောအချိန် ၂၀၀၃ခုနှစ်သည် ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးမှ DKBA ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေသေးသလို စစ်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလလည်း ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုအချိန်ကာလ၏ ပြစ်မှု အတွက် DKBA အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် သို့မဟုတ် စစ်ဦးစီးချုပ်ကို ဖြေရှင်းချက် အရင်မတောင်းဘဲ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခြင်း သည် စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါသည်။ စာရေးသူအနေနှင့် အတိတ်ကာလတွင် ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးအနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုရှိမရှိကို အတိအကျ မသိသော်လည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စွပ်စွဲချက်နှင့် တုန့်ပြန်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး လေ့လာသော် လက်ရှိတွင် ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးသည် မူးယစ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ပေါ်လွင်နေပါသည်။ တဖက်တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်သည့် ဘိန်းနှင့် မူးယစ်ဆေးသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့လည်းကောင်း ထိုင်း၊ လာအိုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှတဆင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ ဖြန့်ဖြူးနေ သည်ကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များ တားဆီးလိုသည်မှာလည်း တရားမျှတပြီး သဘာဝကျပါသည်။
အထက်က ဖေါ်ပြသည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ရှိသည့် ဘိန်းနှင့် မူးယစ်ဆေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသမှ ဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ ဘိန်းနှင့် မူးယစ်ပြဿနာ၏ အဓိကရေသောက်မြစ်နှင့် ပင်စည်ကို ဦးတည်ဖြေရှင်းရန် ပို၍အရေးကြီးသလို မဟာဗျုဟာ လည်း ကျပါသည်။ ထိုင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဈေး ကွက်ကို ထိုးဖောက်ဖြန့်ဖြူးနေသော မူးယစ်ရာဇာကြီးများကို ဦးစားပေး ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ပိုကြိုးစားသင့်ပါ သည်။ မြန်မာအစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသော ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုသာ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးမြန်မာအစိုး ရနှင့် အဆင်ပြေသော ကမ္ဘာ့အဆင့် မူးယစ်ရာဇာများကို ဖမ်းဆီးရန် မကြိုးစားခြင်းသည် ဘိန်းနှင့်မူးယစ်ဆေး ၀ါးကို အမှန်တကယ် တိုက်ဖျက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။
မြန်မာအစိုးရမှ ခွင့်ပြုသော မူးယစ်ရောင်းဝယ်သူများကိုသာ ဖမ်းဆီးဝရမ်းထုတ်သော ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပေါ်လစီကိုလည်း အံ့ဩမိသလို သံသ ယ ဖြစ်မိပါသည်။ လက်ရှိတွင် မူးယစ်ရောင်းဝယ်ထုတ်လုပ်မှုမရှိဘဲ မြန်မာအာဏာစနစ်ကို ဆန့်ကျင်နေသော ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေးကို ဖမ်းဝ ရမ်းထုတ်ခြင်းသည် မြန်မာအစိုးရ အာဏာရှင်စနစ် သက်တမ်းရှည်ရန် အားပေးရာရောက်သလို ရေသောက်မြစ်နှင့် ပင်စည်ကိုခုတ်ရန် မကြိုးစားဘဲ ခြောက်သွေ့နေသော အကိုင်းအခက်ကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ပင်စည်ကို ရေလောင်းအကျိုးပေးခြင်း ဖြစ် နေပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်နေသော ထိုင်းအာဏာပိုင်ကို လေးစားအားပေးသလို တဖက်တွင်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးကဏ္ဍ တွင် မြန်မာအစိုးရ၏ ဩဇာလွမ်းမိုးမှုအောက်မှာ မရပ်တည်သင့်ကြောင်း အကြံပေးလိုပါသည်။
ဖူးဒို(မေလ ၇ရက်၊ ၂၀၁၂)
1. UNODC ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇ၀တ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဌာန
2. APAIC – အာရှ-ပစိဖိတ်အက်ဖက်တမင်း စိတ်ကြွဆေးသတင်းဌာန
3. BANGKOK, March 26 (Xinhua)
4. YANGON, Xinhua, 2011-12-7
မှတ်ချက် # ကေအိုင်စီသို့ ပေးပို့လာသည့် ဤဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာများသည် ဆောင်းပါးရှင်၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက် အာဘော်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
Medicines mostly used အသုံးများ ဆေးဝါးများ
အမျိုးသားများ ပြုလုပ်မိတတ်ကြသော လိင်မှုဆိုင်ရာ အမှား (၆) ရပ် (mmDailyNews ၏ အပုဒ် ၄၀၀ ပြည့် သတင်းဆောင်းပါး)
ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ရှစ်စက္ကန့်လျှင် လူတစ်ဦး သေဆုံး